छोराको शव सुम्सुम्याउँदै आमाले ‘उठ बाबु उठ’भन्दै भक्कानीदै थिइन एक्कासी बालक साँच्चै जीवित भएपछी …. – Sandesh Press
छोराको शव सुम्सुम्याउँदै आमाले ‘उठ बाबु उठ’भन्दै भक्कानीदै थिइन एक्कासी बालक साँच्चै जीवित भएपछी ….
June 18, 2021 395
डाक्टरहरुले बालकको बाँच्ने सम्भावना १५ प्रतिशत मात्रै भएको बताएका थिए । उपचार सुरु भयो । बालकको स्वास्थ्स्थमा तीब्र रुपमा सुधार भयो र उनी पूरै ठिक भएर मंगलबार घर पुगे । अहिले बालकका पिता हितेश आफ्नो ओठमा छोराले दिएको घाउ देखाएर खुसी मनाइरहेका छन् । हजुरबुवा विजय यसलाई चमत्कार बताइरहेका छन् । आमाले भगवानले उनका छोरामा फेरि सास राखिदिएको मान्छिन् । यसबाट परिवार मात्रै होइन गाउँ नै खुसी भएको समाचार दैनिक भाष्करमा छ ।
Prevमेलम्ची बाढी : घरमा फसेका राजु भन्छन् – म’र्छु भन्ने लागेको थियो, झन्न से’ना आएर बचायो !
Nextइन्जिनियर भाई गुमाएँ, १५ दिन देखि ३ वटा कम्पनीमा भाईले गरेको बिमाको पैसा लिन धाउँदा झन बढी पीडा पाएँ
नेपाल प्रहरीकी एसपी मल्लले राखिन् देशकै नाम, राष्ट्रसंघ मिसनकै सर्वोत्कृष्ट घोषित